Kamerona: Mipoitra Mialoha ny Fifidianana ny Nasionalisman’ny Mpiteny Anglisy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2011 4:30 GMT
Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana ny mpikatroka maro izay mpanohana ny antoko mpisintaka Southern Cameroons National Council (SCNC) [Vaomieram-pirenena Kamerona Atsimo] ny ankamaroany.
Namoaka diary avy amin'ny mpikambana ao amin'ny SCNC 150 notazonin'ny mpitandro ny filaminana tao Buea ao amin'ny bilaogy iraisana Up Station Mountain Club ny mpanao gazety Patrick Sianne:
Nanoratra ihany koa i Solomon Amabo fanitazona an'i Njoh Litumbe, iray amin'ny mpitarika mpisintaka, tao amin'ny fonja ny tafika ary nikasi-tanana mpanao gazety:
Na izany aza dia misy ny mpiteny anglisy sasany mahita ny fifandraisana ho fanakambanana-fanjanahana avy amin'ireo nozanahin'i Frantsa taloha ka iantsoany fisintahana ka ny mitabataba indrindra dia rehefa mahatsiaro indray ny lazainy ho fetin'ny fahaleovantenany. Ambaran'ny fitondrana mandrakariva ho tsy ara-dalàna hatrany moa ireny fivoriana sy fihetsiketsehana ireny ary dia miafara amin'ny fanenjika eo amin'ny mpikatroka sy ny mpitandro ny filaminana hatrany ny raharaha.
Inty ohatra amin'izay hirain-dry zareo rehefa migadra ry zareo, araka ny lazain'ny bilaogy Up Station Mount Cameroon:
Nefa misy dimy ny mpiteny anglisy – John Fru Ndi, Kah Walla, Ben Muna , Paul Ayah ary i George Nyamdi – anisan'ny 23 mirotsaka hofidiana ho filohan'i Kamerona amin'ity taona ity.
Stephen Neba-Fuh izay mibilaogy ao amin'ny Voice of the Oppressed mametraka ny heviny ho an'ny mpiteny anglisy rehetra izay “mahazo ny Kameroney Tatsimo (miteny anglisy)”. Io no heveriny ho fanararaotra hametrahana ny lohahevitra ho an'ny mpiteny anglisy avy ao anatiny: